Canon U.S.A. – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Globecast အင်ဒိုနီးရှားရှိအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့ JungoTV နှင့်အတူမိတ်ဖက်
Telefonica HD နှင့် 4K အတွက်တိုက်ရိုက်တီဗီန်ဆောင်မှုများအတွက် Anevia ရဲ့ NEA-တိုက်ရိုက်အထုပ်၎င်း၏ဖြန့်ကျက်ကြီးထွားလာ
Anevia Customer များ Flexible နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Hybrid ကိုတိမ်တိုက် Solutions ဝေငှရန် Red Hat နည်းပညာကို Partner Program ပူးပေါင်းမည်
အတွက် Wirecast S ကနေတဆင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ Stream နှင့် Office 365 နှင့်အတူ Telestream Integrated တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး
SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မများနှင့် VES, Los Angeles မြို့, ပူးတွဲဇူလိုင်လအစည်းအဝေးတွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေး Explore မှ
အရှိန်အဟုန်ရုပ်ပုံများကို Global ရုပ်ရှင် Institute ကအိမ်ရှင်အဖြစ်
အသံ Lounge ဟာရောနှောဖို့ Pete Crimi ကိုအားပေးအားမြှောက်
နိုင်ငံတကာဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ၏တိုက်ရိုက် UHD အသံလွှင့်အဘို့ Globosat ရွေးချယ်သဟဇာတ
အိုင်တီ Pros Subtitles®နှင့် SubtitleNEXT စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်ရောက်ရှိလာသောမှကျွမ်းကျင်သူစာတန်းထိုးအသိပညာဆောင်ခဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်း
Goldcrest Post ကို Jurassic ကမ္ဘာ့ဖလားဘဝမှကယျတငျ: DaVinci နှင့်အတူကြွေလွင့်နိုင်ငံတော်ဖြေရှင်း
Soliton သူတို့ရဲ့4Channel ကိုဒီကုဒ်ဒါအဘို့အဘို့အ NewTek NDI®ပေါင်းစည်းမှုကြေညာ
Sao Paulo, Brasilia နှင့်ရစီးဖီအတွက်နောက်ထပ် Pebble သဲသောင်ပြင်ရှိ Marina Automation Systems နှင့် Globo တီဗီ Expand စစ်ဆင်ရေး
Yamaha Unified ဆက်သွယ်ရေးနယူး Partner Program ကိုကြေညာ
အသံလွှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများ, Inc (BTS) နဲ့ IMT Vislink ကြေညာချက်များ Reseller မိတ်ဖက်
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအမည်များနယူးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်းပံ့ပိုး & လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမန်နေဂျာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာပစိဖိတ်အနောက်မြောက်
Litepanels, OConnor, Sachtler နှင့်ဆုချီးမြှင့်-အနိုင်ရရှိမှုရုပ်ရှင်ပွဲတော် '' တောင်ကျန် '' အဘို့အ Anton / Bauer ထုတ်ကုန်များချောမွေ့ထုတ်လုပ်မှု
အသံလွှင့် Pix EMEA အရောင်း Lead မှစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဝါရင့် Carlo Bolognesi
သြစတြေးလျရဲ့ 3P စတူဒီယို EFS နဲစကေးထဲကသိုလှောင်မှုနဲ့အတူချောမွေ့စွာ Scales
Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ Blackmagic eGPU
အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့်ပြသပါသတင်း NAB ။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် NAB ပြရန်သတင်းထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်: အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ, တီဗီ & ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ။ NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ
Home » Tag Archives: ကို Canon USA သို့
Tag Archives: Canon ၏ယူအက်စ်အေ
Canon ၏ Burbank Reality ဖြစ်လာ
ငါမကြာသေးမီက Canon ၏နောက်ဆုံးပေါ်သွားရောက်လည်ပတ်၏ဂုဏ်အသရေစက်ရုံ, "ကို Canon Burbank" (12,000 စတုရန်းပေ။ ) - အဆိုပါ Professional ကနည်းပညာ & စင်တာ 3400 အနောက်သံလွင်ရိပ်သာ, Burbank ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်အဆင်ပြေအဆိုပါ Burbank စတူဒီယိုနှင့် Warner Brothers အနီးတွင်တည်ရှိသည်။ Canon ၏ Burbank အားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာရှိပါတယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်င်ဒီစက်ရုံသည်ဟောလိဝုဒ်အသိုင်းအဝိုင်းမှဖွင့်လှစ်ကြောင်းပါ! ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ပညာရေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ ...
Canon USA သို့ 500 #NABShow မှာ REALiS THE က WUX2015 နဲ့အတူ PRO AV စနစ် Compact installer LCOS projector ၏ LINE ချဲ့ထွင်
5000 Lumens, WUXGA ဆုံးဖြတ်ချက်, LCOS နည်းပညာ, HDBaseT ™နှင့်အဆင့်မြင့် Optical System ကိုစျေးကွက်များနှင့် Applications ကိုကို Canon က USA, Inc, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ကျယ်ပြန့ဘို့ဤ model အသစ်စံပြဖြစ်စေလျက်, နောက်ဆုံးပေါ်ပရိုဂျက်တာ၏နိဒါန်းထုတ်ပြန်ကြေညာ သူတို့၏ Pro ကို AV စနစ်ကို Compact တပ်ဆင်ခြင်း LCOS (ဆီလီကွန်အပေါ်အရည် Crystal) WUXGA resolution ကို (1920 1200 x) ပေါင်းစပ်ကြောင်းလိုင်းအတွက် ...
Canon ၏ 4k ထုတ်လုပ်မှု 2015 ပံ့ပိုးမြင့်ချဲ့, Long-Focal-ရှည်အသံလွှင့်ကွင်းဆင်းမှန်ဘီလူးမှန်ဘီလူး Developing ဖြစ်ပါတယ်
Canon ၏အမေရိကန်နိုင်ငံ, Inc, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီကို Canon Inc ကလက်ရှိ 4K နှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်ထိပ်တန်းပုံရိပ်စွမ်းဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် High-zoom ကို-အချိုး long-focal-အရှည်လယ်ကို zoom မှန်ဘီလူးဖွံ့ဖြိုးဆဲကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်2/3လက်မအရွယ် sensor များ featuring -capable ထုတ်လွှင့်ကင်မရာများ။ ကို Canon မှာပြရန်လူငယ်ကဏ္ဍ၏4အမျိုးသားအသင်း (NAB) မှာ 2015K လယ်ကို zoom မှန်ဘီလူး၏ရှေ့ပြေးပုံစံပြပါလိမ့်မယ် ...
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဇူလိုင်လ 2018 (499) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
အောက်တိုဘာလ 31 - နိုဝင်ဘာလ 1
entry အဆင့်ကို Creative Designer မှ
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ (Entry Level)
အကြီးတန်း Lighting ဒီဇိုင်နာ
ဓါတ်ပုံပညာ / ကင်မရာအော်ပရေတာများ၏ဒါရိုက်တာ
စက်မှုဒီဇိုင်နာ / အင်ဂျင်နီယာချုပ် (SolidWorks အတွက်ကျွမ်းကျင်မှု)
motion ဂရစ်ဖစ်အဆိုတော် / Video Editor
အယ်ဒီတာ (Arabic အဘိဓါန် Speaking)
ကြေညာလိုက်သည် 2018 NAB ဖြစ်သော Marconi ရေဒီယိုဆုချီးမြှင့်ဆန်ကာတင်
ကလေးများ Programming စည်းကမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်း NPRM ၏ FCC သည်အတည်ပြုချက်အပေါ် NAB ထုတ်ပြန်ချက်
ဖီးလ် Guy ဥရောပအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ် NAB ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ကို C-band NPRM ၏ FCC သည်အတည်ပြုချက်အပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် NAB
Pirate အက်ဥပဒေအိမ်စွမ်းအင် & စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း Passage အပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် NAB
အသေခံရသော Annapolis တွင်ဂျာနယ်လစ်များအတွက် Back "ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း၏ Moment" NAB
ပက်ထရစ် McCreery ရုပ်မြင်သံကြားဘုတ်အဖွဲ့ NAB မှခနျ့အပျခံ
NAB ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ 2018 နည်းပညာအလုပ်သင်အစီအစဉ်ပါဝင်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်
လွှထိပ်သီးအစည်းအဝေး Host မှပြသပါက New York NAB
Music ကိုခေတ်မီအက်ဥပဒေအထက်လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေး Passage အပေါ် NAB ထုတ်ပြန်ချက်
NAB ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ 2018 အသံလွှင့်ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းကျောင်းဆင်းကြေညာ
2018 ရေဒီယို Show မှာအလုပ်ရှာဖွေရေးတရားမျှတသော Host မှပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ NAB
Pirate အက်ဥပဒေအိမ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်နည်းပညာဆပ်ကော်မတီ Passage အပေါ် NAB ထုတ်ပြန်ချက်
ထုတ်လွှင့်ဘိ၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် Las Vegas မှာ, NAB ပြရန် နယူးယောက်နှင့်များ၏ထုတ်လုပ်သူ NAB ပြရန် LIVE ။ ငါတို့သည်လည်းစင်္ကာပူမှာ BroadcastAsia ၏တရားဝင်ဗီဒီယို Partner ဖြစ်ကြပြီးအဘို့အထုတ်လွှင့်၏နောက်ဆုံး 3-နှစ်ပေါင်းထုတ်လုပ်ပါပြီ SMPTE in Los Angeles မြို့.
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ကို Canon Burbank Reality ဖွစျလာ" ။ http://www.broadcastbeat.com/canons-burbank-facility-is-beyond-awesome-canonusapro-canon/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Youtube ကို subscribers
My Posts 27.4Kစာတိုက်